दुई सय ऋण तिर्न नसक्दा एक वर्ष जेल ! - १ आश्विन २०७५, NepalTimes
दुई सय ऋण तिर्न नसक्दा एक वर्ष जेल !
धनुषाका एक दलितले महाजनलाई दुई सय ऋण चुकाउन नसक्दा आइतबार एक वर्षको लागि जेल चलान गरिएको छ ।जनकपुर उपमहानगरपालिका १८ कुवा रामपुरका ६० वर्षीय राधाकृष्ण खंग खत्वे आईतबार स्वयं जिल्ला अदालत धनुषामा हाजिर भई जेल चलान गरी दिन आग्रह गरेका थिए ।
‘प्रहरी पटक पटक घरमा जान्छ । परिवारका महिला पुरुषलाई धम्काउँछ । घर परिवारका सदस्यहरुलाई दुख दिनुको सट्टा जेलमै बस्छु ।’ खंग भनेका थिए । , यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।